Ukuphuka kwimpilo yemihla ngemihla i-tab? | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
2. Hambisa uhamba-ze kwindlu
5. Bhukuda behamba
Ukuphuza - kwabanye baqhelekile, kanti abanye beentloni baze bawaphephe. Akuyena wonke umntu onqabileyo ukuya kwikampu yeholide ye-naturist, ukuphumla kwi-sauna okanye kwi-beach nudist. Kodwa kutheni oko?
Isihloko se-Taboo ubunqunu kwimpilo yemihla ngemihla
Nangona sizalwe simele, abantu abambalwa bathonywa ngabazali babo kwaye mhlawumbi unqulo lwabo, ukuba bangenzi nantoni na.
Ubuthathaka kwimpilo yemihla ngemihla - unxibe endlwini yakho?
Abanye banentloni kuba bacinga ukuba abanalo uphawu olufanelekileyo. Kungaba kwakhona ukuziva unobunono obuhle, obungathanda ukufunyanwa.
Nazi izicwangciso ezimbalwa zokukunceda ukuba uthathe ubunqunu bokuzijonga okanye ujonge isifundo sakho njengomntu ongudala.
1. Ulale uhamba
Ungaqala ngokulala uhamba. Uvakalelwa ukuba umzimba wodwa unokwenzeka nje nge sibini. Impembelelo emnandi, ikakhulukazi ehlobo, kukuba awugqoki nayiphi na impahla ekhunyiweyo.
Nabani na ohlala ekhaya kwaye akadingeki ukuba aye emsebenzini, kwiintengiso okanye apho kuqeshwe khona ahambahambahamba ehambahamba ekhaya aze ahlalise, umzekelo. Okanye ubeka ithawula elincinane kwi-sofa, hlala kuyo uze uphumule nencwadi. Kwakhona kunokwenzeka ukuba uzibuke phambi kwesibuko okanye udansa phambi kwayo ngomculo.
3. Yidla ngeze
Ukuba sele sele uhleli, kuya kubakho ukuba uthathe ukutya kwakho ngaphandle kweengubo. Ukongezelela, ukutya kunokubekwa ngaphandle kwetafile ngaphambili. Ukuba unesibini, unethuba lokucoca ubomi bokuthanda kunye ne-cream chocolate, i-strawberries kunye ne-ukhilimu, umzekelo.
4. Hlahla uhamba ze
Kuyamangalisa ukuba unqabile ilanga ngaphandle kwesambatho okanye ezinye iimpahla. Ukutyhulwa komthungo, ngaphandle kokushiya imizimba ekhanyayo, kunokwenziwa ngomzekelo kwintsimi yakho, ukuba abamelwane abanakukubona oku okanye uzikhusela ngodonga oluphezulu olufanayo okanye iibravu ukusuka kwimbono. Ukuba akukho myezo wangasese okanye ungathanda ukuya echibini, kufuneka uqale uphendule ulwandle lwangaphandle, apho kungabikho khona i-sunbathing engenakho imveliso. Ukuba unganqabile ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo kunye nabesifazane, ungazama kuqala ngaphandle kokulala phantsi elangeni. Emva koko elinye la maxesha ambalwa alandelayo kusenako ukuyeka ngokupheleleyo iimpahla.
Emva kokushona kwelanga, bhukuda ngaphandle kwe-swimwear. Apha unokuziva nje kunye nomanzi opholile.
Ukuba uya kuphuma echibini okanye echibini lakho, uya kuvuya ukubona ukuba akukho mfutho onomdaka onamathele elukhumbeni, oza kuqala okanye owokufuneka utshintshe ngoku, ngenxa yokuba i-bikini eyomile okanye i-trunks ebhukuda igugile. Ngoku kunokwenzeka ukuba nje umile okanye uhlambe elangeni de lide.
6. Ukuphuka kusemvula
Kule ndawo udinga indawo apho kungekho mntu akubonayo, njengomyezo wakho, epakini okanye echibini. Ukuba unganqabile uze ufumane imvula efudumele ehlobo, kunokwenzeka ukuba uzive umzimba wakho kunye nemvula yamanzi.
7. Thatha iifoto ezingenanto
Phantse yonke ifowuni yeselula sele inekhamera kule mihla. Okanye umntu uthatha ikhamera yekhwalithi ephezulu ngokukhawuleza. Kukho amathuba aneleyo ngeenjongo. Ngokomzekelo, uhamba uhamba elala okanye embhedeni. Kwakhona kunokwenzeka ukubeka ikhamera kwi-tripod, umzekelo ukupheka uhamba okanye udlale upiyano uze ucinezele iifoto usebenzisa i-self-timer. Nabani na onomlingane kwaye bangathanda ukumangalisa, umzekelo ngekhalenda equlethe iifoto zabo ezingabonakaliyo, banokubuyela kwi-studio yezithuba zezithombe. Okanye udibana kunye okanye phambi komlingane wakho.
Kodwa qaphela iifoto ezingabonakaliyo - ukuthunyelwa nge-imeyile. Yingozi!
Ngoko akunzima ukwenza izinto ezahlukeneyo zeze. Kufuneka uthabathe isinyathelo sokuqala, oko kukuthi, qhayisa. Emva kokuba unqobile le ndlela yokuvimbela, unokuziva unomzimba omhle kwaye uzive ukhululekile ngaphandle kweengubo.
Ngokweqile, kwanamabhinqa enentombi kunye namadoda ane-buddy angenza le nto yokuzimela, xa ungalindelanga wedwa. Emva kwexesha, abaninzi baqonda ukuba ubunqunu buhle kwaye bazinyamekela ngokuphindaphindiweyo.
Izindlela zokuphumula zokuphila kwansuku zonke
I-Sauna - Ngubani othe tyelela i-sauna engafanelekanga